अशोककाे घरमा भएकाे लफडा सुल्झाउन गएका टंकका दार्इ टिका बुढाथोकी छिमेकिहरूसँग भयो यस्तो बबाल – भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अशोककाे घरमा भएकाे लफडा सुल्झाउन गएका टंकका दार्इ टिका बुढाथोकी छिमेकिहरूसँग भयो यस्तो बबाल – भिडियो
admin October 15, 2018 भिडियो 0
केहि समय अघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल त्यसैगरी युटुबमा गीत गाएर रातारात विश्वभर चर्चित बनेका उनको गायकीलाई निकै रुचाईएको थियो । गरिब परिवारमा हुर्केका असोक दर्जीलाई देश तथा बिदेशबाट सहयोग गर्नेको कमि थिएन । सहयोग रकमबाटै केहि समय अगाडि असोक दर्जीको घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर असोकको परिवारलाई भब्य कार्यक्रम गरेर घर हस्तानान्तरण गरिएको थियो ।
चर्चित संगीतकार टंक बुढाथोकीले ‘मन बिनाको धन ठुलोकि धन बिनाको मन’ गीत अशोकलाई गाउन मौका दिएपछि अशोक झन् हिट भए । टंककै नेतृत्वमा उनको घर बन्यो । तर अहिले अशोकका आमा र बुबाको दिनहुको झगडाले छरछिमेकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको एक भिडियो बाहिरिएको छ । छिमेकिहरुले सधै झगडा गरेको गुनासो सुनाएका छन् । अशोक दर्जीको घरमा आमा बुबाको झगडाले छिमेकिहरु असन्तुष्टि भएका बताएका छन् ।
असोकको परिवारको झगडाको भिडियो अहिले भाईरल बनिरहेको छ कतिपयले घराएसी झगडालाई यसरि सामाजिक संजालमा राख्नाले नकारात्मक संदेश जाने बताउछन । त्यस्तै भिडियो बाहिरिएपछी टंक बुढाथोकीका दाइ टिका बुढाथोकीले झापा पुगे । त्यस पछि गाउँले भेला भएर दमदार झगडा उत्पन्न भयो । टिका बुढाथोकीलाइ हातपात गर्न सम्म पनि पछी हटेनन गाउलेहरु ।
भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला ।
दशैं मनाउन फर्केका यात्रु सहितकाे बस एक्कासी त्रिशुलीमा खस्यो
चियावालीलाई भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो? पहिले के थियो जिम्मा लिन्न! (भिडियो सहित)
के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ? ९ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएपछि मिडियामा…(भिडियो हेर्नुस्)
निर्मला पन्त हत्या बारे पत्रकार सम्मेलनमा बम दिदीबहिनीहरूले यसरी खुलाशा गरे – भिडियोमै हेर्नुहाेस्